साइकल कुदाएर १५ मिनेटमा चिया पुर्‍याइदिने युवकलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार । – Yuwa Aawaj
असार १०, २०७८ बिहिबार 360
Prevनेपालले कहिले खेल्छ विश्वकप फुटबल ? यसो भन्छन् किरण !
Nextविदेशबाट ४ लाख ६६ हजार नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?
अमेरिकाले नेपाललाई भ्रमण गर्न नहुने मुलुकको सुचीमा राख्यो, आफ्ना सबै नागरिक लैजाने !
ग्रेटर नेपालको कुरा उठ्दा बेलायत सरकारले कसरी हेर्दैछ?(भिडियो सहित)